တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အမျိုးသမီးတိုင်း စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အစားအစာများ
စက္ကန့် ၆၀လောက်နဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေဖို့ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
သင့်ဘက်က ဘယ်လိုထင်ထင် ကျွန်မဘက်ကလုံးဝဂရုမစိုက်မှာ မဟုတ်တဲ့ အရာ (၆) ချက်
နက္ခတ်ဗေဒင်အရ သင့်ရာသီခွင်လက္ခဏာရဲ့ စွမ်းအင်အရောင်များ
ဗီတာမင်-စီသည် အအေးမိဖျားနာခြင်းကို အမှန်တကယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား?
ယောက်ျားလေးတွေက ဘာကြောင့် ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးသဘောကျတာလဲ?
ပြီးပြည့်စုံသော innocent girl လေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
မေထုန်ဖွားတွေကို ဉာဏ်အကောင်းဆုံးနဲ့ လှပသော ရာသီခွင်ဖြစ်စေတဲ့ စရိုက်(၅)ခု
ဘဝကြီးမှာ အသက်ရှင်ရတာ ပျင်းရိလာပြီဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်သင့်တဲ့အရာများ
ညဘက် နောက်ကျမှအိပ်တဲ့သူတွေ သိဖို့၊ ဖတ်ဖို့ပါနော် ….
ကံမကောင်းခြင်းတွေရှိခဲ့ရင်တောင် ချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်နိုင်သော လူတွေရဲ့အမူအကျင့်များ
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အဆက်ပြတ်နေသလို ခံစားရတဲ့အခါ ပြန်ချိတ်ဆက်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၂)ခု
Home General Knowledge
in General Knowledge, Health & Beauty, Lotaya
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့လူနေမှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားပေးရမလဲဆိုပြီး အဖြေရှာရတာဟာ အင်မတန်ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စပါ။ အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောပြ၊ ရှင်းပြပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နားလည်ရလွယ်တာက ရှားပါးလှပါတယ်။
ကျန်းကျန်းမာမာ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် မိန်းကလေးအများစုဟာ ဗီတာင်မင်တွေ၊ သတ္တုဓာတ်တွေလိုမျိုး တူညီမျှတတဲ့ အခြေခံအာဟာရဓာတ်တွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကွန်ပေါင်းတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ကျန်းမာနေစေရန်၊ ရင်သားကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ရာသီလာချိန်တို့မှာ ကူညီပေးပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို ဆေးဝါးတွေသောက်သုံးခြင်းဖြင့် မှီဝဲဖြည့်တင်းနိုင်ပေမယ့်လည်း ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သောက်တိုင်းမကောင်းပါဘူး။ ထိုအစား မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့တောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီတွေကို ခန္ဓာကိုယ်အား ဖြည့်တင်းပေးရာရောက်သည့်အတွက် နှလုံးကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသောဖျားနာခြင်းတို့ကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကို လျော့ကျစေပြီး အမျိုးသမီးအများစုဆီမှာ လစ်ဟာနေသည့် ဖောလစ်ပမာဏကောင်းကောင်းကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
မနက်ခင်းမှာပဲစားစား၊ အဆာပြေအနေနဲ့ပဲစားစား ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငှက်ပျောသီးကို စားသုံးပေးခြင်းက ဆိုဒီယမ်ပမာဏမြင့်မားမှုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ကိုင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို လျော့ကျစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အစားအစာတွေထဲမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ကို ထည့်သွင်းစားသုံးပေးခြင်းပါပဲ။
ပရိုတင်း၊ ဖိုက်ဘာတို့ အပြည့်ပါဝင်ပြီးတော့ ရင်သားကင်ဆာကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးကိုကျန်းမာစေကာ ကိုလက်စထရောကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး သံဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်ဘီတို့လို အရေးကြီးတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ စားသုံးခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအာဟာရဓာတ်တွေဟာ အမျိုးသမီးအများစုဆီမှာ ချို့တဲ့တာကြောင့် ထမင်းစားတဲ့အခါ ပဲတွေကို ထည့်ပြီးစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Whole-grain ပေါင်မုန့်တွေက ဖိုက်ဘာပါဝင်တာကြောင့် သွေးအတွင်းရှိ Estrogen ပမာဏကို လျော့ချပေးခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အစာခြေအားကောင်းဖို့ကိုလည်း ကူညီပေးပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကြက်ဥဈေးနှုန်းတွေကတော့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲနေပေမယ့်လည်း သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကတော့ လျော့ကျသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ အားအင်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဆံသားအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ အသားအရေလှစေခြင်း၊ နှလုံးရောဂါကာကွယ်ပေးခြင်း စတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ကြက်ဥအနှစ်မှာ Choline လို့ခေါ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်လို့ ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။
စားသုံးပြီးနောက် အနံ့အသက်တော့ကောင်းကောင်းမကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်ပေမယ့် ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိပြီးရင်တော့ စားဖို့အတွက် တွန့်ဆုတ်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူများများစားသုံးပေးခြင်းက သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်လို့ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အထူးစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်ကျန်းမာရေးက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊ သို့သော် သင့်ကျန်းမာရေးကို နေ့စဉ်ဂရုစိုက်ခြင်းက တခါတရံမှာ အထူးသဖြင့် သင့်မှာ အလုပ်တွေရှုပ်နေရင် လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပုံရပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေမယ့်အရာတွေပြုလုပ်ဖို့ တစ်မိလောက်သာ အချိန်ပေးကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ မနက်ခင်းမှာ...
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝဟာ အရမ်းတိုပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ သင်ရဲ့ actions တွေက တစ်ခြားလူတွေအပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်လည်း ဒီအတွေးတွေက သင့်ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ တစ်ချိန်လုံးလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ စိတ်ကူးကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သင့်အတွက် အလုပ်လုပ်ရတာကပဲ သင့်ရဲ့...
စွမ်းအင်အရောင်ဆိုတာဘာလဲ? စွမ်းအင်အရောင်တွေဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးတဲ့၊ တချို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ဖြစ်တန်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးတဲ့ သင်ဝတ်ဆင်နိုင်သော အရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (သို့) အခါသမယပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ရောင်တည်းဝတ်ဆင်တာက တခြားအရောင်တွေအများကြီး ဝတ်တာထက် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်အရောင်တွေက ရာသီခွင်လက္ခဏာတိုင်းအတွက် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီခွင်အရောင်တွေက...
အအေးမိဖျားနာခြင်းကို ကာကွယ်ကုသဖို့အတွက် ဗီတာမင်-စီကို မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်-စီသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ပါတယ်။ နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါက်တာလင်းနပ်စ်ပေါလင်းက ဗီတာမင်-စီများများသောက်ခြင်းသည် အအေးမိဖျားနာခြင်းကို တားဆီးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ဟာ တကယ်ဘဲမှန်ကန်ပါရဲ့လားဆိုတာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဗီတာမင်-စီသည်သာမာန်အအေးမိတာမျိုးအတွက်သာ အကျိုးရှိပါတယ်လို့ Beth Israel Deaconess...